Sinipa Suite EA Review - Best Forex EA si | Expert etozu | FX ígwè ọrụ
HomeSinipa Suite EASinipa Suite EA Review
Kacha mma Forex EA'S | EXPERT advisors | FX ígwè ọrụ na- Sinipa Suite EA 1
Ahịa: $ 1,599 (Ọnụahịa maka nsụgharị BASIC / 1 LIVE & 1 DEMO ACCOUNT, Nkwado akwụkwọ ikike n'efu).
Ego ụzọ abụọ: Ọ bụla (XAUUSD - Gold na-anwale na ukwuu tụrụ aro)
Cheta na: E nwere nchịkọta dị iche iche 3 nke Sniper Suite EA dị ugbu a:
- Atụmatụ BASIC: Sistemu EA nke nkiti, 1 Live & 1 Demo Account, Nkwado ndi ahia, onu ahia mgbe nile: $ 1,599
- Atụmatụ: Sistemụ EA Ultimate, 1 Live & 1 Demo Account, Nkwado ndị ahịa, ọnụahịa mgbe niile: $ 5,525
- Atụmatụ COMBO: Sistemu EA na nke Ego, Ego 5 Live & Ihe Na-akparaghị oke, ọnụahịa mgbe niile: $ 7,999
Sinipa Suite EA Review - Onye Nleba Anya Maka Ọkachamara Forex Maka Metatrader 4
Sinipa Suite EA bụ ihe ọzọ bara uru Forex Expert Advisor ma nwee ntukwasi obi FX Trading robot nke ndị ahịa na-azụ ụwa Jeremy Delton (onye mepụtara DeltonPRO EA nakwa). Ọ malitere ọrụ ahịa ya na 2004 mgbe ọ dị afọ 29. Jeremy bụ onye na-azụ ego ma gụ akwụkwọ na Harvard Business School.
Nke a akpaka usoro ihe omume ga-eme ihe niile trading omume ndị na-ejikarị FX ahịa na-eme otú ahụ dị ka ọrụaka ma isi analysis, ahịa ịkọ, Money Management, asaghe zụta na-ere iwu, na-emechi iwu, na ọtụtụ ndị ọzọ ọrụ atụmatụ.
Sinipa Suite EA dị na Metatrader 4 (MT4) na Metatrader 5 (MT5) Nzuzo Ịntanetị Forex. Onye ndụmọdụ a na Forex ọkachamara nwere ike ịrụ ọrụ na ụzọ isi ego abụọ.
The Forex robot enwere ule zuru oke kemgbe 2001 ma gosipụta na ọ bụ 100% enwere uru.
Ị nwere ike ịtụ anya uru uru ntanetị nke ọnwa 10-25% na mbipụta BASIC na 100-500% uru uru na ULTIMATE mbipute.
Ntucha kachasị maka BASIC mbipute bụ ihe fọrọ nke nta ka 45% na nke ULTIMATE version 5% nanị.
The Forex EA dị na ụdị ọ bụla nke onye na-ere ahịa na akaụntụ ma ọ bụrụhaala na onye na-ere ahịa na-ekwe ka ahịa ọkachamara na-azụ ahịa. Ụfọdụ brokers anyị na-ejikarị eme ihe Pepperstone, RoboForex, IC ahịa, FxPro ma ọ bụ Forex.com.
Sinipa Suite EA e mepụtara otu ọkachamara ìgwè ndị ọkachamara ahịa ndị na-achọ ịhụ gị ịga nke ọma!
Jiri nke Sinipa Suite EA na-atụgharị gị ego n'ime ọlaedo!
Mfe ego na-enweghị mgbalị ọ bụla bụ ihe Sinipa Suite EA ihe nile gbasara. Ọ bụ atụmatụ Forex arụmọrụ nke na-enye gị ohere ịnọdụ ala, zuru ike na naanị lelee FX Trading Robot na-eme ya aghụghọ. Mgbe ọnụọgụ abụọ, Shinekpa na njedebe nke azụmahịa gị nyere gị, Robot na-eweghara ma na-ejikwa azụmahịa niile maka gị. Nke a na-enye gị ohere ịchịkwa mgbe ị na-elekwasị anya ike gị n'ihe ndị ọzọ dị mkpa.
The Sinipa Suite EA nọ na 24 / 5 na-achọ ohere ahịa bara uru. Ya mere ọ gwụla ma ị gbanyụọ ya, ị gaghị echefu otu ịzụ ahịa ahia ọ bụla.
N'adịghị ka anyị bụ ụmụ mmadụ, ndị Sinipa Suite EA enweghi nsogbu nke mmetụta uche ma ọ ga - arụ ọrụ naanị na gburugburu ebe ana - agbako. Onye ndụmọdụ ọkachamara agaghị eme mkpebi oge adịghị anya.
Sniper Suite EA - Banyere Tragic Logic, Mbido na ihe ndị ọzọ chọrọ
Sinipa Suite EA trades na ụfọdụ awa, nyochara na-ekpebi ndị price direction maka ọzọ di na nwunye awa ma ọ bụ ụbọchị. Ọzọkwa a ọkachamara-enye Ndụmọdụ-enye gị ohere ahia na kpọmkwem dị ize ndụ ma na-achọsi ike profitability. The trading usoro rite nnukwu uru na-emepe trades kwa ụbọchị.
a Forex EA na-arụ ọrụ na ụzọ abụọ isi ego. Nkwado ego ntinye aka bụ $ 1000 maka ụdị ọhụụ.
Sniper Suite EA - Mmelite ndị kachasị ọhụrụ na November 2019
Versiondị Ahịrị: V1.5 na Ultimate Version V3.0
Lastbọchị ikpeazụ nke mbipụta: 22nd November 2019
Nkwado ndị teknuzu: Xbọchị 5 kwa izu site na ozi-e
Platform: Azụmahịa akpaghị aka site na Metatrader 4 na Metatrader 5 (MetaQuotes Software Corp.)
Ofdị azụmahịa akaụntụ: ECN, NDD, Pro, ọkọlọtọ, Micro… ụdị akaụntụ niile nke ahịa ahịa na-akwado Metatrader 4 na Metatrader 5
Uzo okwu: Mkpebi akpaaka nke mkpụrụedemede 4 (1,2342) ma ọ bụ 5 (1,23429).
Ego Management: Lot na akpaaka Ewu na Mkpuchi Mgbapụta Mgbapụta (EA ntọala ndabere na 0.5% / ahia)
Ego ụzọ: Ha abụọ
Oge ejirila: Ọ bụla
Usoro ahia ahia: Ziri ezi ihe omimi zuru oke nke nwere ma obu n’ebughi uzo Mwepu-Igbanwe. Dịkwa nke ọma yana ọkara ntọala ịgbanwee ngbanwe
leverage: 1: 200 na n'elu
Ntinye obere ego: $ 1000 maka otutu 0,01 ma ọ bụ 10,000 cent maka 0.1 centlot
Ore ahia Broker nke nhọrọ nke aka gị nke na-enye ohere ahia ahia EA
Uru: 50-100% kwa ọnwa ma ọ bụ 1000 - 5000% kwa afọ na iweghachi azụmaahịa dị iche iche.
Ndị na-egosi: NSO ỌR PR PRICE na ATR
Ntọala ahia: Nhazi atọrọ ma tọọ nhọrọ faili dị ka nhọrọ ire azụmaahịa
E nwere nnọọ olileanya na-adịghị ize gwụsịrị na Sniper Suite EA. Ndị na-emepụta ngwá ahịa a na-eme ka obi sie ha ike karịa 80% ịga nke ọma ọnụego na ga-enye Verified pụta.
Ụgha Nkwụghachi: Ụbọchị 30 ego azụ nkwa nke onye na-ere ya Sinipa Suite EA
Sinipa Suite EA dị na unbelievable price, ntụgharị naanị $ 1,599. Ya mere na-eche na jidere gị oyiri!
Gaa na Official Sniper Suite EA website
Malite ụbọchị: January 1, 2016
Ise Uru EA Review
ukara sniper ụlọ ea saịtị
Sinipa Suite Forex EA
Sinipa Suite Forex Expert Advisor
Sinipa Suite Forex Trading robot
Sinipa Suite Review
Bigben Oge EA Nyocha
Nditịm Limited ego - 75% Gbanyụọ
Sinipa Suite EA bụ na Sale na 75% Discount!
Sinipa Suite EA bụ na ọdabara maka Metatrader 4 (MT4) na Metatrader 5 (MT5) trading n'elu ikpo okwu.
The Expert Advisor e n'ụzọ zuru okè na-anwale kemgbe 2001 na pụtara ịbụ 100% mụ profitability (ezigbo ogologo eserese). Ya mere ọ bụrụ na anyị na-eji 10 ego abụọ kwa ọnwa profitability ga-30-50%.
Nweta ihe ọmụma banyere sinipa Suite EA ebe a: